Gịnị bụ parthenogenesis? - AFRIKHEPRI
Gịnị bụ parthenogenesis?
Nkwupụta nke Hugo Chavez na Nnukwu ọgbakọ 61 nke United Nations
La parthenogenesis (na grec parthenos, nwa agbọghọ, na Jenesis, ịmụmụ) bụ nkewa site na a gamete nwanyị na-enweghị ọgwụ. Ọ bụ usoro ịmụ nwa. Ọ bụ nke usoro ọmụmụ maka inwe mmekọahụ maka na ọ chọrọ itinye aka na gamete mana na-enweghị onyinye mkpụrụ ndụ ihe nketa nke mmadụ ọzọ nsonaazụ a yiri ọmụmụ nwoke.
A na-ahụ ihe ịtụnanya a na ndọkụkụ na anụmanụ ụfọdụ, mana ọ nwekwara ike bute ya. Na alaeze nke osisi, parthenogenesis bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị angiosperms. A na-achọta akụkụ dị iche iche na parthenogenesis taxa comme les nematodes, na polychaete, na oligochaete, na nemerteans, na ụmụ ahụhụ (tinyere ụmụ ahụhụ dịkaanu na aphids), Les gastrotrichs na ụfọdụ ihe ndi ozo.
"Anyị aghaghị ịghọta na ịlụ nwanyị ga-ekwe omume nke parthenogenesis" kọwara Dr. E. Roge.
Ihe omimi nke mmeputara mmadu
Site Dr. Bernard
Ihe omuma nke sayensi nke ịdị adị nke parthenogenesis na njikọta njikọta mmadụ, nke nwere ike ịmepụta agbụrụ ukwu - ụzọ dị iche na usoro anụmanụ na nke kachasị elu, nke ndị nne na-amaghị nwoke iri na itoolu na England wee nwee ike ịme ụmụ na afọ ole na ole gara aga, dịka nkwenye nke ndị otu dọkịta nke Bekee gosipụtara, ndị British Medical Association kwadoro dị ka ihe ndị dị adị banyere akụkụ mmadụ ma ọ bụ ịmụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ka onye edemede ahụ kwuru. Ọ na-ekwupụta na ihe ndị inyom a nwere ike ime - nwanyị ọ bụla nwere ike ime ya.
Ụmụ oke na ụmụ nwoke
Futura Sciences. Ahụmahụ ahụ sitere na April 2004 na Japan.
Ọ bụ nyocha nke Japan ka e mebiri ozizi ọhụrụ nke usoro ihe ọmụmụ. Ndị ọkà mmụta sayensị Asia na-arụ ọrụ na parthenogenesis - mmeputakwa na-enweghị njikọ fatịlaịza, ya mere n'ebughị nwoke, na ụmụ nwanyị nwere mmekọahụ - enwere ike ịmụ nwa nke nne na nna nne abụọ mụrụ, mana n'enweghị nna. Nke mbụ n'ime anụ ahụ. Ndọ aka na nti na usoro eji eme ihe, nke dị iche na nkedo, enweghị ike itinye aka na mmadụ, maka ma ụzụ na ihe gbasara iwu. Otu n'ime akụkụ ahụ nke nnwale ahụ bụ n'ezie òké nke DNA gbanwere ka o mee ka ọ bụrụ nwoke mgbe a tụrụ ime nwa ẹmbrayo. N'ime embrayo nke na-eme ara, ụfọdụ mkpụrụ ndụ, ole na ole, dị iche iche na-adabere ma nna ma ọ bụ mama ha na-ebute ha. "Ọ bụ akara nne na nna," Prọfesọ Axel Kahn, onye nduzi nke Ụlọ ọrụ Cochin Institute na Paris, gwara The Associated Press Thursday. Ụfọdụ n'ime mkpụrụ ndụ ndị a na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha si nne pụta ma gbachie nkịtị mgbe ha si n'aka nna, na nke ọzọ. Iji mezuo ọrụ ha, ndị nchọpụta ahụ gbanwere ihe nketa mkpụrụ ndụ nke nwanyị na-akpa ọchị site na ịtụgharị "akara nne na nna ya", na-ekwe ka otu n'ime mkpụrụ ndụ ya na-emekarị ka ọ pụta ìhè. Ọ bụ transgenesis nke a na-ekwe ka ụmụ nwanyị na-akpa àgwà dị ka nwa nwoke. Maka Kent Vrana, onye na-eme nchọpụta na Mahadum Pennsylvania, ọ bụrụ na e nwere ike iji ọgwụ na-amị mkpụrụ, ọ bụrụ na DNA enweghị nna, otu a ga-atụ anya maka mkpụrụ ndụ mpi.
Mmegharị si : Mmekọahụ mbụ - Elizabeth Gould Davis - 1971
Akwụkwọ, ihe e kere eke n'oge na-adịbeghị anya
Akụkụ ahụ nke nwanyị na-emepụta ihe dị nnọọ ukwuu karịa nke nwoke ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọbụna na mammals ala, ovaries, akpanwa, ikpu, wdg, yiri nke nwanyi ahụ, na-egosi na usoro ọmụmụ nwa bụ otu n'ime ihe ndị mbụ e kere eke.
N'adịghị iche, akụkụ ụmụ nwoke na-amụ nwa, testicles na penis, dịgasị iche iche dịka ụdị na n'oge evolushọn, yana ọdịdị nke ụkwụ - site na ikiri ụkwụ ahụ. Ya mere, o doro anya na ọkpụkpụ ahụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ dabara, ọ bụghị ikpu ka ọ dabaa. Mpempe akwụkwọ ahụ mepụtara n'oge na-adịghị anya; nke a na-akọwa site na eziokwu ahụ bụ na nwoke n'onwe ya na - arụpụta site na ngwụsị oge nke nwanyị e kere eke mbụ. N'ihi na nwoke bụ nwanyị na-ezughị okè.
Nwoke ahụ bụ nwanyị na-ezughị okè
Ndị ọkà mmụta ihe omimi na ndị ọkà mmụta physiologist na-agwa anyị na Chromosome Y nke na-emepụta ụmụ nwoke bụ X chromosome - nke chromosome nwanyi - agbajiri na oruru. Ụmụ nwanyị niile nwere chromosomes abụọ X, ebe nwoke ahụ nwere chromosome X site na nne ya na nna ya Y. O yiri ihe ezi uche dị na ya na kromosome a na-agbagwoju anya bụ njehie mkpụrụ ndụ - ihe ọghọm nke okike - na nke mbụ enwere naanị otu mmekọahụ - nwanyị inwe mmekọahụ.
Ngwongwo physicochemical dị mfe
Mmeghari nke ụmụ nwanyị na-enweghị mmekọahụ, parthenogenesis, ọ bụghị nanị na ọ ga-ekwe omume, kama ọ na-eme ebe a na ebe ahụ n'oge a, ikekwe dịka ihe fọdụrụnụ na-ese onyinyo nke ihe ọmụmụ oge ochie n'oge ụwa zuru oke. Ebe ọ bụ na Jacques Loeb chọpụtara na parthenogenesis na 1911, "Anyị maara na nwoke adịghị mkpa maka mmeputakwa, nakwa na onye na - ahụ maka ahụ ike dị na nwanyị dị n'ime nwanyị ahụ zuru ezu iji kpasuo ya"[Raymond de Becker]
Isis, chi nwanyị nke parthenogenesis
Isis, chi nwanyị nke ndị Ijipt oge ochie, nne nke chi, si onwe ya; ọ bụkwa nwa nwanyị na-amaghị nwoke; ụlọ nsọ ya dị na Sais, obodo nsọ ahụ, dere akwụkwọ mpako a: Onwebeghi onye buliri uwe m, mkpụrụ amụrụ m bụ Anyanwụ. Nganga nke nwanyi kariri okwu ndia nile; ọ na-ekwuwapụta onwe ya na mmadụ adịghị ya, ọ dịghị mkpa ịnweta mgbakorita ya na ịmụ nwa. Gris ga-azaghachi nkwupụta mkparị a. Jupiter, nna nke chi ndia gha muputa Minerva n’enyereghi aka nke ndi nwanyi, na Minerva bu chi "Ònye ka amuru ime n'ọchịchịrị nke afọ nne", ga-abụ onye iro nke ezinụlọ kachasị elu.
Ọbara mmadụ - Akwụkwọ nyocha (2017)